Giiftii Gidiramtuu Akkoo Manooyyeen Wal Bara - Afoolaa
Giiftii Gidiramtuu Akkoo Manooyyeen Wal Baraa – Afoolaa
30 Apr 2016 Kan maxxanse Naa'ol
Mana samii gadii lafaa olii naaf ijaara! – Akkoo Manooyyee
Giiftii Gidiramtuu Akkoo Manooyyee Wal Bara
Bar-durii, giiftiin biyya bulchitu, maqaan ishee Akko Mannooyyee jedhamtu tokkotu ture. Giiftiin kun uummata garmalee rakkisaa turte. Namni hundumtuu odaa jalattii walgaa’eeti waaqayyoon galgalaa ganama harka isaanii gara samiitti olkaasanii yoo kadhatan, “yaa waaqi, giiftii gidiramtuu kana nurraa buqqisi” jedhanii kadhataa turan.
Gaaf tokko, uummata walgayii waamtee, “namoota gabaaba ta’an mara akka fixxan” jettee labsii (ajaja) dabarsite. “Maaliif?” jechuun uummanni ishee gaafannaan, “aangookoo keessa galanii waan jeeqaniif meeshaa waranaa qabdan hundaatti fayyadamuun balleessaa” jettee ajaja dabarsite. Ummannis sodaachuun namoota gaggabaabaa fixanii, gabaabaa tokkicha qofa odaa jala dhofkatan.
Akkoon Manooyyee erga kana raawwachiifte booda, otoo deemtuu kanniisni ishee hidde. Achuumaan galtee, “gaagurafi kanniisa” lafa kana irra akka balleessitan jettee labsii dabarsite. Uummannis namicha gabaabaa mala akka himuuf dhofkatan san mala gaafatan. “Mucaa isheetifi isheef damma laadhaa!” jedhee uummata gorse. Uummanni akkuma gorfameetti damma hoggaa ishiif laatu “Gaaguraafi kanniisa hin xuqiinaa” jettee labsii duraan kennite diigde.
Yeroo gabaabaa erga turtee booda, uummata yaa’ii waamte. Uummanni yommuu walga’u, teessoo ishiirraa kaateeti “Manan itti boqodhu samiif ardii gidduutti atattamaan akka naaf ijartan,” jettee uummata akeekkachiifte. Sana booda, uummanni gara lixu dhabe. Niyaadan, nidhiphatan, waan godhan wallaalun namicha gabaabaa san bira dhaquun mala gaafatan. Namichi gabaaban sunis akkas jechuun gorse.
“Akka aadaa keenyaatti utubaa abbaatu dhaabbata, kottuu dhabbadhu; isarratti hundoofnee siif ijaarra” jedhaniin. Isheenis, utubicha dhaabuuf yaalte, garuu ta’uu dide. Kanaafuu, ajaja kanas diigdee ajaja biroo dabarsite. Ajajni kan biraanis akkana jedha ture: “Tuulluun gamasii sana biyyoota bulchu ilaaluu waan nadhooweef tullicha diriirsaatii dirree taasisaa!” jettee ajaja dabarsite. Ummaannis gorsa namicha abshaalichaa irratti hundaa’uun yeroo ishee hirribni fudhate balbala cufaatii karaa tulluun hin mullanneen balbala baasan. Barii yeroo kaatu gama ishii yoo laaltu dirreen itti mullannaan, “ajajnikoo amma kunoo fiixaan ba’ee”, jettee gammadde.
Qajeelfamni ishii kun darbee yeroo xiqqoo erga turtee booda, uummata walitti qabdee, “biyyakoo ilaalee waliin ga’uu waan dadhabeef, bineensa gafarsa jedhamu qabaa fidaaatii kooraa itti naaf fe’aa” jettee ajajje. Uummannis mala barbaada nama gabaabaa sana bira dhaqan. Namichi gabaabanis akkas jedheen: “Waaqayyo furmaata isiniif kennuuf” jedheen. “Akkamitti?” jechuun gaafatan. Namichi gabaabanis akkas jedheen,”funyoofi shiboo qopheessaatii gara bosonaa deemaa gafarsa marsaa qabaatii akkuma isheen jettetti kooraa irrattii fe’aafii. Achuumaan ishees irratti jabeessaa hidhaa!” jedheeti uummata gorse. Uummaannis akkaatuma gorfameen gafarsa qabuun irratti ishee hidhe. Daandii isheen irra deemtu irratti darbee darbee boolla waan tureef gafarsichi otumaa deemu boolicha yoo lixu, rifatee utaalee ba’uun Akkoo Manooyyee fudhatee bosona keessa bade. Yeroo kana, ishee kuffisee lafarra harkisee allayyaa buusuun lubbuu ishee dabarse. Uummannis sana booda nagaa argatee jireenya haaraafi gaarii jiraachuu jalqabe jedhama.